Nkọwa ụlọ ọrụ | Zhongrong Technology Corporation Co., Ltd.
Zhongrong Technology Corporation Ltd (koodu ahia: 836455), ka etolite na 1999 nke bu otu n’ime ulo oru China National High-Tech nke amara na R&D, mmeputa na ahia nke ethanol na-abughi oka ya na ihe ndi ozo. Ọ bụ onye na-emepụta ọka ethanol na-enweghị ọka na China, yana onye na-emepụta acetate kachasị ukwuu na North nke China na North-East China. Eresịla ngwaahịa ndị a n'ahịa ụlọ na Eshia, mba Europe na ntụgharị USD150 nde kwa afọ. O nwere ụlọ ọrụ enyemaka abụọ, Tangshan Zhongrong Technology Co., Ltd. na Shanghai Zhongrong Technology Co., Ltd.
Zhongrong Technology Corporation Ltd nwere 3 Provincial R&D Center ma nweta ihe karịrị 11 sayensị na teknụzụ rụzuru nke dị elu karịa ọkwa ụlọ, yana ihe karịrị 42 mba na ụlọ. Ọ bụ nnukwu nsọpụrụ na anyị emeela Mmemme Ọchịchị Mba na Mmemme Ngwongwo Ọhụrụ Mba. Anyị bụ ndị mbụ ụlọ ọrụ na China ịzụlite na-abụghị ọka ethanol na-eme ka rụzuru yana metụtara nchọpụta Kemịkalụ. Anyị nwere nnukwu njikwa na teknụzụ sitere n'ọtụtụ mahadum ndị ama ama, ma bụrụ onye mbido na onye nrụpụta nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ethanol ethanol nke China.